Chipo cheWheelchair Technology - Zvakanakira maWheelchair
A wiricheya chinhu chakakosha kwazvo kune avo vanoremadza kana vasingakwanise kufamba nekuda kwechimwe chikonzero kana chimwe. wiricheya vagadziri vanopa akawanda akasiyana marudzi e mavhiripu kuenderana nechero ipi kuremara varwere vangave.
Pane Chichemo chemaoko, magetsi mavhiripu uye kunyange mavhiripu yakagadzirirwa kushandiswa kutamba mitambo. Chero remara munhu anogona kuwana wiricheya izvo zvinoenderana nezvavanofarira uye zvinovapa nyaradzo yavanoda kutora chikamu muzviitiko zvakasiyana.
Kukomberedza mu hwiricheya
mavhiripu izvozvi zviripo zvekuita zviitiko zvakadai sekuenda kumahombekombe uye mumvura, kudzika musasa, kuenda kumatunhu ezvisikwa munzvimbo dzisina kuenzana, zvekufamba uye nezvimwe zvakawanda. Idzi inhau huru dze wiricheya vashandisi nekuti zvinovapa pfungwa yekuzvimirira uye kuzvivimba vachiziva kuti havafanirwe kuvimba nemumwe munhu chero chavanoda kubuda.
Most mavhiripu iripo nhasi ine sarudzo yekuwedzera zvishongedzo izvo zvinoita kuti hupenyu hufambe mu wiricheya zvirinyore. Zvimwe zveizvi Accessories sanganisira zvinhu zvakaita semubati wedanda, kapu kana chinwiwa chemabhodhoro emvura, makushoni ezvigaro nemusana, zvakabatanidzwa zvekuchengetedza amburera uye zvimwe zvakabatanidzwa zvinoita kuti rwendo rwuve nyore zvakanyanya kune wiricheya mushandisi.
Mabasa ezuva nezuva pane a hwiricheya
The mavhiripu rega iyo remara munhu anoziva kuti vanogona kuramba vachishingairira kutora chikamu mumabasa ezuva nezuva vachiziva kuti vane mudziyo wakakodzera kuvabatsira kuti vatore chikamu. Kuziva izvi kunogona kubvisa kushushikana uye kushushikana uye nekupa chidimbu chepfungwa. Ziva kuti vanogona kungozorora uye kunakidzwa nekushanyirwa kupfuura zvavaifunga kuti zvaigona. Izvi zvinoita kuti shanduko ive wiricheya mararamiro zvakanyanya kutetepa.
Kuva mune wiricheya haisisiri pembedzo yekusaenda kunze uye kutora chikamu mune zvezuva nezuva zviitiko. Saka buda uye unakirwe nezvinhu zvese zvawakagara uchifarira kuita uchibatsirwa naako wiricheya uye usingafaniri kuvimba nemumwe munhu kuti akubatsire kutenderera.